Daarektera FBI ka durii Robert Mueller fi pirezidaanti Tiraampi
Wannii pirezidaantii Ameirkaa Doonaldi Tiraampiin himatan laakkuma bultee kaatuun waan haaraa darachaa dhufti.
Waan duula filannoo isaati fi Raashiyaan bara filannoo pirezidaantummaa Amerikaa waliin qabaachaa bahan qorachuuf abbaa alangaa addaa itti filan: Rooberti Muuler,daarktera Biiroo Qorannoo Amerikaa,Federal Bureau of Investigation (FBI) ka durii.
Namii amma abbaa alangaa addaa dhossaa duulii filannoo Tiraampii fi Raashiyaan waliin qaban jedhan qorachuuf filame Rooberti Muuler.
Namii kun bara pirezidaanti Joorji Buush filanii bara Obaamaallee ganna lama daarektea FBI tahee hojjate.
Itti aanaa abbaa alangaa addaa mootummaa Amerikaa, Rod Rosensteyinsenitti kalee daarektea kana qaxaree labse.
Abbaa alangaa addaa guddaa Amerikaa, Jeff Sessions inninuu waan Raashiyaa fi mootummaan Tiraampi waliin qaban keessa jiraa jedhanii akka innii qorannoo akkanaatuu keessa hin seenne itti muran.
Tiraampi abbaan alangaa addaa dubbii tana qoratu filamee jennaan “tun falfala faana faana nama deemu” jedhee Twitter ufi irratti barreesse waan dhossaallee Raashiyaan waliin hin qamnu jedhee mormate.
Wannii qorannoo tana oowwise eegii daarekteri Biiroo Qorannoo Federaala Amerikaa (FBI), James Comey ka duri Tiraampi akka ani waan FBI gorsaa nagaa biyyoolessaa Maayki Filiiniin qorachuutti jirtu dhaabu na gaafate jedhe.
Roobert Muuler dhugaa jirtu qotee baase ulfinna Amerikaa fulaatti deebisa jedhee abdata.Rippaabilikaanii fi Demokiraatilleen tanuma jedhan.
Evan Siegriedlleen miseensa paartii Rippaabilikaaniiti:“Roobet Muuler xurii ministirii haajaa alaatii fi FBI-n wal hanqata.Bajata ufii ta namaan qaxaratee hujii tanaan hojjatu qaba."
"Hojjattoota FBI cufaa ufi irraa oofee waan fedhe hojjachuu dandaha.Gara dubbiin tun isa geessitu cufaa seenee qorachuu dandahaa tana itti gaafatama qaba."
Dubbiin Raashiyaa fi bulchiinsa Tiraampiin qorachuutti jiran tun yoo daarekteri FBI ka hujii irraa gussan waan jiraa dhufee koree senetii Ameeikaatti hime ammoo dubbiin tun haga qaraallee caala totokkahaa deemti
Seenaa Amerikaa keessatti pirezidaantii eegii huji jalqabee ji'a diqqaa keessatti akkana qoratanii dubbiin itti jabaatte arginee hin beennu jedha Seneter Evbaan